पहिलो नेपाली कुलचन्द्र गौतम पुगेको राज्य - Durbin Nepal News
पहिलो नेपाली कुलचन्द्र गौतम पुगेको राज्य
प्रा. डा. दुर्गा दाहाल ७ जेष्ठ २०७७, बुधबार २०:३३
न्यू हेम्पसायर ( New Hampshire )
अमेरिकाको उत्तरी पूर्वी भागमा अवस्थित राज्यहरूमध्ये न्यु ह्याम्पसायर पनि ग्रामीण परिवेशमा अवस्थित एउटा सुन्दर राज्य हो । छोटकरीमा यो राज्यलाई NH भनेर पनि चिनिन्छ । यस राज्यको कुल क्षेत्रफल ९३५० स्क्यायर माइल र जनसंख्या १.३६ मिलियन रहेको छ । यहाँ पनि निकै नेपालीहरू व्यवस्थित रूपले बसोबास गर्छन । यद्यपि वर्षको पाँच महिना जति यहाँ भारी चिसो हुन्छ तर अन्य सात महिना मनोरम र चित्ताकर्षक हुन्छ ।
यहाँका राज्यपाल ( Governor ) को नाम Chris Sununu हो । उनी अत्यन्त मिलनसार र नेपालीहरू प्रति पनि सहानुभूतिशील देखिन्छन । यहाँका नेपालीहरूको सम्बन्ध अमेरिकी जनप्रतिनिधिहरू संग निकै राम्रो देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्र भएकाले जनजीवन सामान्य र सरल छ । अमेरिकी समुदायसँग सहकार्य गरेर बसेका नेपालीहरू यस राज्यमा उल्लेख्य मात्रामा पाइन्छ । यहाँका अमेरिकनहरूले नेपाली समुदायलाई खुबै माया र सहयोग गरेको यो पंक्तिकारले पनि देखेको छ ।
यो राज्यको राजधानी कनकर्ड (Concord) हो । पहिले अंग्रेजद्वारा शासित यो राज्यलाई Granite State भनेर पनि चिनिन्छ । यस राज्यमा धेरै granite अर्थात् विभिन्न किसिमका मूल्यवान पत्थरहरू पाईने हुनाले त्यसो भनेर पनि चिनिन्छ । सन १७७५ मा यो राज्य पनि अंग्रेज साम्राज्यबाट मुक्त भएको हो । सर्वप्रथम अंग्रेज शासनबाट मुक्त हुने १३ वटा राज्यहरू मध्ये New Hampshire पनि एक हो ।
Derry भन्ने सहर यो राज्यको एउटा नाम चलेको ठाऊँमध्ये पर्दछ । यो सुन्दर सहर त्यस राज्यको Rockingham County मा पर्दछ । अन्तरिक्ष ( space ) मा पहिलो पटक अवतरण गर्ने तीन व्यक्तिहरू मध्ये Alen Shepard पनि Derry, NH मै जन्मिनु भएको हो । साथै अमेरिकाका विश्व प्रख्यात कवि Robert Frost पनि यसै राज्यको त्यही Derry भन्ने सहरमा धेरै वर्ष बसेर सुन्दर – सुन्दर कविता- कृतिहरूको सिर्जना गरेका थिए । यिनीहरू बाहेक यो राज्यले अन्य धेरै चर्चित सिताराहरू जन्माएको छ विभिन्न क्षेत्रहरूमा ।
यो राज्यमा स्याऊ ( apple ) का बगैँचा र खेती धेरै मात्रामा हुने हुनाले स्याऊबाट उत्पादित धेरै खाद्य- पदार्थहरू पाइन्छ । यहाँको शिक्षा पद्धति र स्वास्थ्य सेवा उन्नत स्तरको मानिन्छ ।
यो राज्यको मौसम साधारणतया चिसो भए पनि हावापानीको दृष्टिकोणले राम्रो मानिन्छ र चारवटा मौसमको मज्जा लिन पाइन्छ । यहाँ विभिन्न समुदायका मानिसहरूका अतिरिक्त नेपाली मूलका मानिसहरूको पनि क़रीब ९०० भन्दा माथिको संख्यामा उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ । यस राज्यमा सर्वप्रथम पाइला टेक्ने नेपालीको रूपमा सन १९७० को दशकमा विद्यार्थीका हैसियतले श्री कुलचन्द्र गौतमको नाम लिइन्छ ।
सम्प्रति यस राज्यमा अमेरिकी सरकारले क़रीब १८०० जना भन्दा माथिको संख्यामा भूटानी मूलका नेपालीहरूलाई पुनर्वासको व्यवस्था गरि दिएको छ ।
यस राज्यमा नेपालीहरू कृषि, उद्योग, वाणिज्य, साना र मझौला व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य , आई. टी मा कार्यरत छन । यसका अतिरिक्त नेपाली समुदायको एउटा ठूलो हिस्साले अशक्त र अपांग मानिसहरूको सेवामा आधारित व्यवसायमा आँफूलाई समर्पित गरेको पाइन्छ ।
यो राज्यमा विविध समाज र समुदायका बीचमा एउटा विचित्रको एकता छ । अनेकतामा एकता खोज्ने मानिसहरूको कमी छैन यस राज्यमा । एकापसमा न्यानो भाईचारा र अति मज़बूत सम्बन्ध रहेको परिलक्षित हुन्छ । एन. आर. एन, किरात राई समाज, गुरूंग समाज, बुद्ध समाज, भूटानी समाज र Thank you, America समाज लगायत करिब ९ वटा जति नेपाली सामाजिक संघ- संस्थाहरु छन ।
उपर्युक्त संघ- संस्थाहरूको अगुवाई र तत्वावधानमा यस राज्यका नेपालीभाषी समुदायहरूले नेपाली सभ्यता, संस्कृति र परम्परालाई जोगाउने, हुर्काउने, र विदेशमा रहेर पनि वर्षैभरि नानाथरिका कृयाकलापहरू गर्ने गरेको पाइन्छ । नेपाली नयाँवर्ष, दशैँ- तिहार, सरस्वती पूजा, लोह्सार , एलम्बर साँझ, बुद्ध जयन्ती, लक्ष्मी जयन्ती, भानु जयन्ती, Thank you, America आदि अनेकन कार्यक्रमहरू मानाउने गर्छन । यस्ता कार्यक्रमहरूमा नेपालीभाषी समुदायका अतिरिक्त स्थानीय अमेरिकी जनसमुदायका प्रतिनिधि एवं स्थानीय सरकारको पनि उपस्थिति हुने गर्दछ ।
उल्लेख्य गतिविधि :
यस राज्यका नेपाली समुदायले अन्तर्राष्ट्रीय नेपाली साहित्य समाजको आयोजनामा, त्यहाँ भएका सम्पूर्ण संघ- संस्थाहरू मिली दोश्रो अनेसास अन्तर्राष्ट्रीय च्याप्टर सम्मेलनको आयोजना अत्यन्त सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सफल भए । त्यसको उद्घाटन समारोहमा डेमोक्रेटिक दलका सिनेटरहरू र रिपब्लिकन दलका गभर्नरहरू एउटै मंचमा उपस्थित भई नेपाली भाषा- साहित्यको जय- जयकार गर्दै नेपाली आप्रवासीहरूको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्दै मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेको यो पंक्तिकारले पनि सुनेको थियो ।
स्मरण रहोस, उक्त सम्मेलनको सफल संयोजन श्री कृष्ण गिरीले अत्यन्त उत्साहपूर्वक र प्रेमिल ढंगले गर्नु भएको थियो । यो राज्यले अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछ । यस राज्यलाई swing state को रूपमा लिईन्छ । यस राज्यमा नेपालीहरू पनि क्रमश: अमेरिकाको मूलधारे राजनीतिमा अग्रसर हुँदै गरेको परिलक्षित हुन्छ जुन अनुकरणीय र स्वागतयोग्य छ ।
अमेरिकामा आएर नेपालको फोहोरी राजनीतिमा संलग्न हुनुभन्दा यहीँको राजनीतिमा चासो देखाउनु उत्तम मानिन्छ । यस राज्यको नारा Live free or die रहेको छ । अमेरिकामा नेपालीहरूको इतिहास र जनजीवन ६ छैटौं अध्याय क्रमस…
(सहयोगी; श्री कृष्ण गिरी, हाल क्यालिफोर्निया)
पुराना अध्याय पढ्नका लागि तलको लिङ्क क्लिक गर्नु होला
७ जेष्ठ २०७७, बुधबार २०:३३ मा प्रकाशित